Ressi Medri (Eritrea), 8 Feb 2015 (Alldhooftinle.com)
Awoowe gabdhii uu awoowaha u ahaa sii carbuunay.
Awoowe Shiine ah oo ku nool magaalada Kunming ee dalka Shiinaha ayaa gabadh lix jir oo uu awoowe u yahay uga tegey rahmad ahaan meel lagu dabaasho isla markaana lagu qubaysto dibna uguma soo noqon.
Arintan ayaa bilaabatay markii odaygaasi uu ka qubeystay goobtaas, isla markaana u sheegay inuu lacagtii guriga ku soo ilaaway sidaa darteed ay gabadha yar ee uu awoowaha u yahay deposit ahaan u haystaan intuu lacagta usoo qaadayo. Laakiin bil ka dib odaygii lama hayo.
gabadha yar oo lagu magacaabo Siyao ayaa sheegtay inay mudooyinkii danbe la nooleyd awoowaheed isla markaana aanay wax dhibaato ah ku arkin. Shaqaalaha ka shaqeeya meesha gabadha lagaga tegey ayaa ka hadlay idaacadaha, TVyada iyo wargeysyada iyagoo ka codsanaya awoowahaasi inuu u yimaado gabadha yar isla markaana aan laga qaadi doonin wax lacag ah.
Ilaa intii uu soo baxay warka gabadhan yar ayaa waxaa codsiyo soo qortay dad badan oo doonaya inay korsadaan. Laakiin dadka gacanta ku haya ayaa sheegay inaanay cidna ku wareejinayn ilaa dowladu soo dhexgasho arinkan. lama oga gabadhan yar aabaheed iyo hooyadeed waxa ku dhacay, iyo sababta awoowaheed uga dhuuntay midna.
Jacfar Bin Jacfar AlMakhzuumi